Home Wararka Kooxda Al-shabaab oo soo bandhigtay gaari ay ka qabsadeyn Ciidanka AMISOM
Kooxda Al-shabaab oo soo bandhigtay gaari ay ka qabsadeyn Ciidanka AMISOM
Ciidamo ka tirsan Ururka Al Shabaab ayaa wadada waxa ay u galeen kolonyo ka tirsan ciidamada Midowga Afrika AMISOM oo kasoo baxay degaanka Balli doogle,islamarkaana kusoo jeeday Muqdisho.
Ciidamada AMISOM ayaa waxaa qabsaday dagaal culus xilli ay maraayeen aagga Degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose.
Intii uu dagaalku socday ayaa Shabaab waxaa u suurtagashay in ay gacanta ku dhiggaan mid ka mid ah Gawaaridda dagaalka ciidamada AMISOM.
Shabaab ayaa la sheegay in ay qaateen gaarigaasi dagaal ka dibna ay gubeen.
Sidda ay xaqiijiyeen maamulka gobolka Shabeellaha Hoose goobta uu Weerarku ka dhacay ayaa aheyd meel howd ah.
Al-Shabaab ayaa bilihii lasoo dhaafay xoojiyay Weeraradda ay ka geysanayaan Wadada u dhaxeysa Magaalada Muqdisho iyo Baydhabo.
Previous articleBeesha Caalamka oo war kasoo saartay Xanibaada Deeqaha Ee Villa Soomaaliya Looga soo rogay Soomaaliland!!
Next articleDeegaano katirsan Galmudug oo laga diiday Lacagta Shilin Soomaaliga
Dab qasaaro dhaliyay oo ka kacay Degmada yaaqshiid!!